Maxim Averin: ubomi bomntu, i-biography, iifoto ezizodwa. Umfazi kunye nabantwana bakaMaxim Averin, umtshato
Ngaphambi kokumomotheka okumnandi kukaMaxim Averin akakho omnye umfazi oza kumela, kwaye isipho sakhe somdlali sasiye saqaphela ukuba ngababukeli nabagxeki. Inkwenkwezi yemidlalo kunye ne-cinema ibangela amahlebezi amaninzi kumaphephandaba kunye nokungafuni kwakhe ukwabelana ngokusondeleyo. Yingakho ubomi bobuqu boMaxim Averin nsuku zonke ngakumbi nangaphezulu kufana ne-equation ne-three unknowns. Umculi waseRussia othakazelisayo uyawufihla ngokucophelela kwamehlo aqinileyo kunye neendlebe ezibukhali. Lo mdlalo wokufihla kunye nokufuna unika umhlaba umcinge. Masibale, kwaye siya kubabala abafazi bakhe nabantwana! Asiyi kusombulula i-equation, ngoko ncinane siza kuqhelana nomntu othakazelisayo ofumene kakuhle kwiifoto.
Umsebenzi we-Actor: unyana waqaphela iphupha likayise
UMaxim Averin wazalelwa eMoscow ngowe-1975, kwintsapho ye-seamstress elula kunye nomqeshwa kaMosfilm. Umsebenzi owenza umsebenzi wayethanda kakhulu ngophupha nguyise, kodwa ayizange iphumelele - wahlala engumculi-umhlobiso. U-Maxim wayekhulile ngokuvakalayo kwi-studio yefilimu, kwaye eneminyaka emihlanu wayenenkwenkwezi kwifilimu yakhe yokuqala "I-Adventures of Count Nevzorov." UBawo wathatha unyana wakhe ekuhambiseni ifilimu eMakhachkala, kwaye umlawuli wanikela intsapho enomtsalane indima ebalulekileyo.
Emva kwendima encinci, ubaba waqala ukugxininisa ekuphuhlisweni kweetalenta zeMaxim. Inkwenkwezi yekamva yaqala ukutyelela i studio yeNdlu yeCinema kwaye idlala kwimveliso yakhe yokuqala kwiTheater of Miniatures. Kwaye kwakukho i-Theater Institute. Shchukin, wangena apho uAverin kuphela okwesibini. Ootitshala abatshabalalisiweyo be-Maxim abanomtsalane oyingqayizivele kunye nokumomotheka. Baxela kwangaphambili ikamva elihle le ntanda. Emva kweminyaka emithathu emva kokuphumelela kwiSiko soProfeto, ootitshala baqala ukuzaliseka-uMaxim wathola indima emininzi kwiSatyricon. Ukususela ngeli xesha kwanamhla, i-biographie, iitalente nobomi bomntu benkwenkwezi zixubusha ngokucokisekileyo kumaphephandaba.
I-Filmography yomdlali: ukusuka kwi-scoundrel enemibala eya kwi-wood-grouse
Ngo-1999, u-Averin wabhala kwifilimu ye-comedy ethi "Uthando olubi", apho edlala ngokugqithiseleyo "umdlalo ombala". Umdlali we-actor waqala ngokugqithiseleyo kwindima ethi "uRashiya uJim Kerry," njengoko abagxeki bakhe bamthi, befanele badlale abalinganiswa bee-comedy iminyaka emininzi.
Kodwa ifilimu "Iimvunguvungu zeMagnetic" ibonise ukuba uMaxim Averin unakho ngokutsha ngokuphindaphindiweyo kubalinganiswa obukhulu, kwaye u-"Triumph" wonikezela ubungqina. Emva koko kwakukho iifilimu ezimbalwa ezahlukahlukeneyo, kwaye ekugqibeleni, uchungechunge oluthi "I-Capercaillie".
Kwakuyikhulu leepesenti ezichaphazelekayo kule nxaxheba. Indima yomphathi oyintandokazi uSergei Glukhov yayiyinqobo kwiAverin. Emva koko, waba ngumdlali ongumdumi waseRussia, owamkela inhlonipho evela kwindoda yindlebe, kunye neefoto zakhe zingaphantsi kwemilenze yabantu abathandanayo.
Ngomnyaka ka-2012, umphathi wecandelo lobudlova wanikwa i-rolegroup u-Oleg Bragin kwinqaku "U-Sklifosovsky." Kwakunye "ibhomu". Umdlali onguchwepheshe onothando, u-Lovelace, wenza izinto ezimangalisayo kwiindawo zokudlala, kwaye ebomini bakhe babenabileyo abaninzi kunye neengxaki ezininzi. Abaphulaphuli babenomdla kunye nobunzima bakhe kwaye banandipha umdlalo omnandi kunye namaqela amnandi.
Ubomi bobuqu bomntu onobukrakra uMaxim Averin
Ngokusemthethweni, uMaxim Averin akasatshatanga kwaye uxubusha ngobomi bakhe bodwa phantsi koqeshiso oluqinileyo, umqhubi owenziwe kwiintatheli. Njalo xa udibana ne-press, uMaxim ukhangele phambili kwiingxoxo ezinengqondo, kodwa intatheli zeentatheli ezisuka emnyango zibuza imibuzo malunga neendoda, abafazi kunye nabantwana. Ngaba yinyani ukuba umdlali wezinto eziphathekayo, uthanda izinto ezinzulu emva kwakhe kunye neentlobo zeentliziyo zabasetyhini abaphulaphukileyo, ekugqibeleni watshatile waza wabuyela ekubeni nguyise? Yonke le mibuzo iphindaphindiwe kwaye iphindwe ngaphandle kokuphela. Kwaye onke amaxesha u-Maxim ngokukhawuleza abizela iindulanali "izilo" kwaye akaceli ukuba azityhuze ngemibandela yothando - akayi kunika izifihla ze-alcove phantsi kokuhlushwa.
"Kukho ezimbini kuphela ezithandweni, kwaye okwesithathu akufanele azi malunga nalo, ukuze i-chemistry yeemvakalelo ingaphuli," u-Maxim Averin ukholelwa.
Maxim Averin kunye nentombazana
Amantombazana okuqala kunye alandelayo uAverina
Uthando lokuqala luvela kuMaxim kwiminyaka eyi-16. Wathwalwa yintombazana kangangokuthi wayemcebise naye, kodwa ke wagqiba ekubeni abuyele umtshato ngaphambi kokungena kwiziko. Kodwa ubomi bomfundi bethanda u-Averin, kangangokuthi wayelibale ngesithembiso sokutshata. Kwaye ke yonke into yanyuka yabuya yajika yindoda enhle. U-Maxim Averin wathandwa ngokungaphezu kwezihlandlo ezili-12 ezithandanayo, iinkonzo zesevisi kunye nobudlelwane obucacileyo kunye namantombazana amangalisayo. Emva kwe "Glukhar" kwakukho amaninzi ngamahleko malunga nobudlelwane bexesha elifutshane kunye nomlingani waseVictoria Tarasova. Ngoko okanye akunjalo, umntu unokuqiqa nje.
UVictoria Tarasova kunye noMaxim Averin
Umtshato kaMaxim Averin
Ingqungquthela yesibini yeendlebe yahamba xa isithunzi somdlali onomntwana sibonakala enetheni. "U-Maxim Averin watshata waza waba nguyise," intatheli zibhala ngokuzithemba. Ngokutsho kwamahemuhemu, umfazi we-actor wayenguTatiana, owathetha ngokukhawuleza kwelinye ludliwano-ndlebe. I-brunette enobukrakra, apho uMaxim enothando ngothando, ayinanto enxulumene nendalo engabonakaliyo kwaye ayibonakali kwiintlanganiso ezisemthethweni kunye naye.
UAverin unomntwana ezandleni zakhe
Kungekudala, umculi unomsindo omkhulu ngentshisekelo yeendaba, kwaye ngandlela-thile uya kulahlela: "Omnye utshatile ngokusemthethweni, umntu wenza ubudlelwane boluntu, kwaye ndihlala umtshato womphakathi." Ewe, kunjalo, kwenzeka, kwaye kuthiwa yi-side side of popularity. UMaxim Averin kunye nobomi bakhe bomntu ngumbuzo ovulekile. Hlalani nilungele!
Ingqumbo yamandla: zingaphi izenzo zeplastiki zenziwa ngu-Alexander Shpak, isithombe phambi nangemva kweplastiki
Indlela yokuhlangabezana nokudandatheka ekhaya
UOksana Samoilova utyhile iimfihlelo zomtshato ovuyisayo kunye noZhiganom
Inkcazo yefa leZaritsyno
I-Phytotherapy: izityalo zangaphakathi
I-Pasta evela kwiBrazil kunye namatamatisi omisiwe
Iprokhor Chaliapin inenkwenkwezi yokutshulwa kwesithombe kunye ne-ex-bride of former-pr-director, photo
Yenza isikhumba sezandla kunye neenyawo